​चुनावको मुखमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कमल थापा उपप्रधानमन्त्री
काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता विपरित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका नेताहरुलाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । मन्त्रीपरिषद विस्तारसँगै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यस्तैगरी राप्रपाका नेताहरु दिलनाथ गिरी, विक्रम थापा....
​फुट्दैछन् नेपालका हिमतालहरु ! भू वैज्ञानिकहरुले गराए सचेत
काठमाडौं । भूवैज्ञानिकहरुले नेपालका हिमतालहरु फुट्ने जोखिम रहेको भन्दै सचेत गराएका छन् ।
विश्व प्राकृतिक विपत्ति दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भू वैज्ञानिक डा. कविराज पौडेलले नेपालको भूवनावट जोखिमयुक्त रहेकाले त्यसबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सचेत गराए....
​मागेजति सिट नपाएपछि डा. भट्टराई सूर्य चिन्हबाट चुनाव नलड्ने
काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले सूर्य चिन्हबाट चुनाव नलड्ने भएको छ । यसअघि एमाले र माओवादीसँग तालमेल गर्दै सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति गरेको नयाँ शक्तिले गठबन्धनमा आफूहरुलाई उचित स्थान नदिइएको भन्दै सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव नलड्ने जनाएको हो ।
​नेपालको संसदको आयु शनिबार सकिँदै, के हुन्छ अब ?
काठमाडौं । नयाँ निर्वाचन हुनै लाग्दा नेपालको हालको व्यवस्थापिका संसदको आयु शनिबार सकिँदैछ । संसदका ५९२ सांसदहरु मध्यराति १२ बजेपछि भूतपूर्व हुने भएका छन् ।
संसदको शुक्रबारको बैठक नै अन्तिम भएपनि शनिबार विशेष बैठक राखिएको छ । बैठकमा सभामुख र शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नेछन्....
​नेपाल प्रहरीको टोपीमा समेत झल्कियो भारत
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले लगाउने टोपीमा छिमेकी मुलुक भारतको झन्डा र राष्ट्र गान भेटिएको छ । प्रहरीको टोपीमा भारतको राष्ट्रिय झन्डा तिरंगा, ‘सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा’ लेखिएका थुप्रै संकेत टोपीको भित्रपट्टी राखिएको पाइएको छ ।
देशको सुरक्षाका लागि सधै तत्पर रहने यी....
युएईमा मानव तस्करी, १५ नेपालीको उद्वार
काठमाडौं । टुरिस्ट भिसामा संयुक्त अरब इमिरेट्स पुगेर बिच्चलीमा परेका १५ नेपालीलाई त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले उद्धार गरेको छ । प्रहरी र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर दलालले उनीहरुलाई त्यहाँ पुर्याएका थिए ।
उद्धार हुनेहरूमा मकवानपुरका सुनिल रावत, भीमबहादुर बम्जन, नवराज लो, सुन्दर....
जमुना गुरुङद्वारा एनआरएनए अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा
काठमाडौं । जमुना गुरुङले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गुरुङले उम्मेदवारीको घोषणा गरेकी हुन् ।एनआरएनएको आठौं विश्व सम्मेलन एवं महाधिवेशन शनिबारबाट काठमाडौं सुरु हुँदैछ ।गुरुङले एनआरएनएले निर्माण गरिरहेका मेगा प्रोजेक्टलाई समयमै सम्पन्न गर्ने,....
भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख एक लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ
राजविराज । नेपालका सरकारी कार्यलयहरुमा दिनदिनै भ्रष्टचार बढ्दै गएको छ । भ्रष्टचार नियन्त्रणको लागि अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यलय रहे पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । जसको कारण भ्रष्टचारका घटनाहरु बढिरहेका छन् । अख्तियार सक्रिय हुँदा यस्ता घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
​असोज २८ गते संसद विघटन हुने
काठमाडौं । असोज २८ गते संसद विघटन हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूची बुझाउने अघिल्लो दिन आगामी शनिबार नै संसद्को आयु स्वतः समाप्त हुने भएको हो ।
नेता र संसद् सचिवालयबीच बुधबार भएको छलफलले यस्तो सहमती गरेको हो । समानुपातिक उम्मेदवार....
​गौचनको अन्त्येष्टि आज, शहिद घोषणा गर्ने तयारी
काठमाण्डौ । हत्या गरिएका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको अन्त्येष्टि बिहीबार आज गरिने भएको छ । महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिले शव परिवारको जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ । कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बुधबार साँझ बसेको थियो ।
सोमबार हत्या गरिएका गौचनलाई शहीद....